That's so good, right?: October 2011
ပြောင်းလာတာတစ်နှစ်လောက်ရှိပါပြီ။ သူမက ခမ်းနားထည်ဝါတဲ့ အရှိန်အ၀ါ၊ ရင့်
ကျက်တည်ငြိမ်မှု၊ အရပ်ရှည်သွယ်မြင့်မားမှုအပြင် နုညံ့တဲ့
ဆံနွယ်ရှည်ရှည်တွေပိုင်ဆိုင်သူပါ။ အမြဲတစေ ခပ်မြင့်မြင့် ဒေါက်မြင့်ဖိနပ်
တွေနှင့် ကိုယ်လုံးအလှပေါ်လွင်စေတဲ့ အ၀တ်အထည်တွေကို ၀တ်ဆင်တတ်ပါတယ်။
အစကနဦးတော့ ကျွန်တော်တို့စကားသိပ်မပြောဖြစ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ မကြာခဏ
လှေကား အတက်အဆင်းမှာ တွေ့ဆုံမိတတ်လေ့ရှိပြီး သူမက ကျွန်တော့်ကို
နုညံ့သောအပြုံးဖြင့် 'မင်္ဂလာပါ' လို့ ခပ်တိုးတိုးနှုတ်ဆက် လေ့ရှိပါတယ်။
သောကြာနေ့ညတစ်ညမှာ ကျွန်တော်ဝယ်လာတဲ့ ညအိပ်ချိန်ထွန်းတဲ့မီးအိမ်နှင့်အတူ
အိမ်ကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော့် အိပ်ကပ် တွေထဲ တံခါးသော့ကို ဟိုနှိုက်
ဒီနှိုက်ရှာဖွေရာ မီးအိမ်ဟာ လက်ထဲကလျှောကျပြီး အသံကျယ်ကျယ်ကို ရုတ်တရက်
ဖန်တီးလိုက် သလိုဖြစ်သွားတယ်ဗျ။ အိမ်နီးချင်းရဲ့ တံခါးပွင့်ဟလာပြီး
စိုးစိုးတစ်ယောက် အလန့်တကြားမျက်နှာနှင့် ရပ်နေတာကို မြင်လိုက်ရပါရဲ့။
'အို..ရ့ပါတယ်၊ မင်း အနာတရ တစ်ခုခုမဖြစ်တာပဲ ၀မ်းသာလှပါပြီကွယ်' သူမ
နှုတ်ဖျားမှာ အပြုံးချိုချို တွဲခိုရင်းပြောပါတယ်။
ကျွန်တော့် အိပ်ကပ်တွေအားလုံးနှိုက်ပြုရှာဖွေပေမဲ့ သော့တစ်ချောင်းမှ
မတွေ့။ ကျွန်တော့် အိမ်သော့မယူဘဲ လော့ခ်ျလုပ်ပြီး အပြင် ထွက်သွားမိတာပဲ။
သော့ပိုတစ်ချောင်းပေးထားတဲ့ သူငယ်ချင်းကလည်း သူ့မိဘအိမ်ခဏပြန်သွားတာ
သူမကိုကြည့်ပြီးပြောမိပါတယ်။ သူမကိုကြည့်ရတာ အရောင်စုံနှင့်
အဖြူရောင်ဘောလုံးပြောက်တွေ ပါတဲ့ ညအိပ်အင်္ကျီရှည်နဲ့ ခြေထောက်ကတော့
ဈေးကြီးပေးရတော့မှာ။ စကားမစပ် မာမီ့နာမည်က စိုးစိုးတဲ့။ သားရဲ့
အိမ်နီချင်းအသစ်ပေါ့' ကမ်းပေးတဲ့ သူမလက်ကို
ကျွန်တော်ဆုပ်ကိုင်လိုက်ပါတယ်။ လှပပြီး နုညံ့သလို လက်သည်းရှည်များက
အနီရောင်။ 'ဟုတ်ကဲ့..ကျွန်တော်က ဇေယျသူပါဗျ' ကျွန်တော်သတိပြုမိတာက သူမ
နည်းနည်းရေချိန်မှန်နေပုံကိုပါ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် နှစ်လိုဖွယ်တော့
သူမ ကျွန်တော့်ကို စူးစမ်းတဲ့အကြည့်နှင့် ကြည့်နေသေးတယ်။ ပြီးတော့
သူမနှုတ်ခမ်းမှာအပြုံးတွေပေါ်လာရင်း 'အထဲဝင်လေကွယ်? သား သော့ပြင်ဆရာမလာခင်
စောင့်နေလို့ရတာပဲ။ သူလာမလာတော့ မပြောတတ်ဘူးနော်'
ကျွန်တော် သူမနောက်ကနေ လျှောက်လှမ်းလိုက်တာ သူမရဲ့လှုပ်ရှားမှုတိုင်းဟာ
နှစ်သက်စရာပါ။ သူမ တိုက်ခန်းက တကယ့်ကိုအပျံစား။ တခြားသော
အချိန်ကာလတစ်ခုထဲ လျှောက်လှမ်းနေရသလိုပါပဲ။ ၁၉၇၀ပြည့်လွန်နှစ်များက
အပြင်အဆင်များပါ။ နောက်ဆုံးပေါ် တီဗီ အပြားကြီးနှင့် ဒီဗီဒီစက်ကြီးတွေကသာ
'မာမီ့မှာ Tullamore Dew ပဲရှိတယ်ကွယ်၊ ၀ီစကီသောက်တဲ့သူမဟုတ်တဲ့ Sherry
သူမဆီကရနေတဲ့ ရေမွှေးနံ့က ညှို့ယူဖမ်းစား နေသလို ခံစားရတယ်ဗျ။
ကျွန်တော်တို့ အေးဆေးသာယာတဲ့ စကားပြောလေးတွေနှင့် အဓိကပြောဆိုကြရာ သူမ
တတိယမြောက် sherry ခွက်ကိုသောက်ပြီးချိန်မှာတော့ သူမအကြောင်းကို
စတင်ပြောဆိုပါတော့တယ်။ သူမစိတ်ထဲမှာ အမြဲကလေးတစ်ယောက်လိုချင် နေခဲ့တာ။
မိန်းမအစစ်တစ်ယောက်မဟုတ်ခဲ့လို့ပဲ။ သူမဟာ အမျိုးသမီးအစစ်တစ်ယောက်
မရေမရာအတွေးမျိုးတော့ဝင်ခဲ့ကြောင်း ပြောပြဖြစ်တာပေါ့နော်။ သူမ က
'ရိုးရိုးသားသားပွင့်ပွင့်လင်းလင်းရှိတာ မာမီဝမ်းသာတယ်ကွယ်၊ ဒါပေမဲ့
မာမီလှတယ်လို့ သားမထင်ဘူးလား' တဲ့မေးရဲ့။
'အိုး....မာမီက သိပ်ကို...' သူမနှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်ပြုံးတယ်။ ဟုတ်တယ်
သူမကပြောပြသေးတယ် သူမတစ်ဘ၀လုံး အမျိုးသမီးတစ်ယောက်လိုသာ
ဘာဟော်မုန်းဆေးကိုမှလည်း မမှီဝဲ မသုံးစွဲခဲ့ပါဆိုပါတယ်။ သူမ
ရင်သားတွေကလည်း သဘာဝကဖန်ဆင်းပေးထားတာ။ ကျွန်တော်မှတ်မိ သတိထားနေတာကတော့
သူမ ကိုယ်ခန္ဓာအစိတ်အပိုင်းတွေ အကြောင်းပြောနေတော့ ကျွန်တော့်ပါးပြင်တွေဟာ
ရဲတွတ်နီဆွေးကာ ရှက် မိနေခြင်းကိုလေ။ 'အင်း..ဒါဆို
'အို....သားမွေးနေ့က နက်ဖြန်လား မာမီ့အသက်က ၄၀၀န်းကျင်ရှိပြီ။
အမျိုးသမီးတစ်ယောက်က သူ့အသက်ကို မပြောပြသင့်ဘူးနော် ဟဲ ဟဲ'
'ကျေးဇူး...ဇေယျ...သားက အတော်စကားပြောတတ်တာပဲ။ ဒါပေမဲ့ မာမီက
သားအမေအရွယ်လောက် အသက်ရပါပြီကွယ်။ သား မေမေက မာမီလိုပဲလှရဲ့လား'
'Oh My God! Sorry ပါသားရယ်။ သားလေးက သနားစရာကောင်းလိုက်တာ' စိုးစိုးက
ကျွန်တော့်မှာ မေမေရှိမနေတော့ခြင်းကို တော် တော်ခံစားသွားရတယ်ထင်ပါရဲ့။
နည်းနည်းလေးတော့ ကသိကအောက် နိုင်ပေမဲ့ ကြည်နူးရပါတယ်။ စိုးစိုးရဲ့
မျက်မှောက်မှာ အကြင်နာနဲ့ ထွေးဖက်ခံရတဲ့ ကျွန်တော်
တကယ့်သက်သောင့်သက်သာပါပဲ။ စိုးစိုးက ကျွန်တော့်နဖူးလေးကို နုညံ့တဲ့
အနမ်းပွင့်ကိုခြွေပြီး ကျွန်တော့်နားရွက်နားတိုးကပ်ကာ ခပ်တိုးတိုး 'မာမီက
သားရဲ့ မေမေဖြစ်နိုင်ချင်ပါရဲ့။ မာမီ..အမေတစ်ယောက်ဖြစ်ရတာကြိုက်တယ်'
'ဆောရီးသားရယ်....မာမီက နည်းနည်းရှေးရိုးဆန်တယ်ပြောပြော ကိုယ်ခံစားရတာကို
'မဟုတ်ပါဘူး, မာမီက တကယ့်ကို အံ့အားသင့်ဖို့ကောင်းတဲ့လူတစ်ယောက်လို့
ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဗျ' ကွဲပြားခြားနားပြီး ထူးဆန်းတဲ့ ခံစားမှုတွေ
အမျိုးသမီးအစစ်များစွာထက် ပိုပြီး လှပကာ sexy ဖြစ်တဲ့ အမျိုးသမီးမဟုတ်တဲ့
သူမနှင့် ကျွန်တော် ငြိမ်သက်စွာ ဆက်လက်ထိုင်နေခြင်းက ကျွန်တော့်
အာသာဆန္ဒတစ်ခုခုကို စတင်နှိုးဆွလာနေတယ်။ ကျွန်တော့်ခြေထောက် တွေပေါ်
သူမခြေတံ နုနုညံ့ညံ့တွေကို ကန့်လန့်ဖြတ်တင်ထားရင်း လှုပ်ရှားနေတာက
ကျွန်တော့်ပေါင်တံကို လက်နဲ့ပွတ်သပ်နေသလို ပါပဲ။ ကျွန်တော့်ငပဲဟာ
သောက်ရမ်း မာတောင်လာပါပြီ။ ကျွန်တော် ခြေထောက်တွေကို အသာဆွဲဖယ်
တင်ပျဉ်ခွေထိုင်လိုက်ရင်း 'အင်း.... ကျွန်တော် သော့ပြင်သမားကို
'ဒီည မာမီအခန်းမှာအိပ်လို့မရဘူးလား? မနက်မှသော့သွားယူပေါ့။
ကျွန်တော်ဘယ်ငြင်းဆန်နိုင်မလဲဗျာ။ ဧည့်သည်တွေအတွက် ထားတဲ့အခန်းကလည်း
မဆိုးပါဘူး သက်သောင့်သက်သာအနားယူလို့ ရပါတယ်။ ဟူး....ကျွန်တော့်စိတ်တွေ
သောက်ရမ်းထန်နေပြီ မတတ်နိုင်ဘူး လက်ကစားပြီးအဆုံးသတ်ရမှာပဲ။ ငပဲကို
ဘောင်းဘီထဲ လက်လျှိုပြီး ပွတ်သပ်နေစဉ်မှာပဲ
အခန်းတံခါးခေါက်သံတိုးတိုးနှင့်အတူ တံခါးပွင့်လာပြီး စိုးစိုး
တစ်ယောက်ဝင်လာပါတယ်။ သူမ အိပ် ယာဆီကို လှမ်းလာပါတယ် အနီရောင် ခပ်ပါးပါး
အမေကောင်းတစ်ယောက်က သားကို အိပ်ရာဝင်ပုံပြင်ကောင်းကောင်းနှင့်
ချော့သိပ်သင့် တယ်မဟုတ်လား' ကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်း ထူအမ်းအမ်းကို သူမ
နုညံ့စွာနမ်းပါတယ်။ ကျွန်တော့်လက်တွေက ပြည့်တင်းနေတဲ့ သူမပေါင်တံတွေနှင့်
တင်ပါးအစုံကို ပွတ်သပ်ပြီး တုန့်ပြန်မှုပြုလိုက်တာပေါ့။ သူမလျှာကို
ရှည်လျားစွာထုတ် ကျွန်တော့်အာခံတွင်းထဲဖိသွင်းကာ အံ့အားသင့်ဖွယ်....တမ်းတ
စွဲမက် ဖွယ်အနမ်းကို သင်ပေးပါရဲ့။ 'မာမီ့ပေါင်တံတွေကို
သဘောကျတယ်နှင့်တူတယ် မာမီ့ကိုယ်လုံးက လှလို့လားဟင်' သူမလျှာတွေ
'ဒါလေးကိုရော ကိုင်ကြည့်ကွယ်' ကျွန်တော့်လက် တစ်ဖက်ကို သူမဆွဲကိုင်ပြီး
ရင်သားဆီနေရာချပေးတယ်။ သူမရင်သားတွေဟာ နုညံ့တယ်၊ သိပ်မကြီးပေမဲ့
လက်နှင့်ပြည့်သလိုပဲ။ 'အာ...မာမီ့ နို့သီးခေါင်းလေးတွေ အရမ်းမာနေပြီ။
လာပါ ကလေးရယ် မာမီ့နို့တွေစို့စမ်းပါ' သူမက လှိုင်းထပြီး တက်ကြွတဲ့ အသံ
တစ်မျိုးနှင့်ပြောတယ်။ စိုးစိုးက ခေါင်းအုံးပေါ်မှီချလိုက်တာကြောင့်
လပ်လပ်။ ကျွန်တော် ရင်သားတွေကို တကယ့်နုနုညံ့ညံ့ထိတွေ့တယ်
ကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်းလေးတွေနှင့်ပေါ့နော်။ ပြီးတော့ ခပ်မျှဉ်းမျှဉ်း
စုပ်ယူလိုက်သေးတယ်။ စိုးစိုး အသက်ရှူသံတွေဟာ ပြင်းထန်ပါရဲ့။
တိုးညှင်းသောအသံဖြင့် 'မာမီ့အတွက် သားမှာဘာရှိလဲကြည့်ရအောင်'
ခပ်ပါးပါးအတွင်းခံသာဝတ်ထားတဲ့ ကျွန်တော် မြင်မကောင်းအောင်ပဲ ဘောင်းဘီကို
မိုးကာတဲလိုဖြစ်နေစေတာအစွမ်းကုန်။ ကျွန်တော် စိုးစိုးရဲ့
နို့သီးခေါင်းတွေကို တပြွတ်ပြွတ်စုပ်ပြီးနေလိုက်တော့ သူမရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်မှာ
နည်းနည်းတော့ ပေါက်ကွဲသမှုဖြစ်လာသလိုပင်။ ကျွန်တော်ဝတ်ထားသောအတွင်းခံကို
ဆွဲမချွတ်သေးဘဲ အပေါ်ကနေ သူမလက်နု နုညံ့ညံ့လေးဖြင့် ပွတ်သပ်ကစားနေပါတယ်။
မာမီ့အပိုင်ပေးနော်' သူမက စကားဆိုရင်း ကျွန်တော့်ငပဲကို အကျဉ်းထောင်ကနေ
လွှတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Oh My God! ကျွန်တော့်ငပဲကို သူမ ကစားပုံက
မယုံနိုင်ဖွယ်ပါပဲ။ သူမဘာလုပ်နေတယ် ဘယ်နေရာကိုကိုင်ရမယ်ဆိုတာ
သိနေပြီးသား။ ကျွန်တော့်လက်တွေဟာ ပေါင်တံတွေကိုပွတ် သပ်နေရာကနေ
ပေါင်ခြံဆီအလှမ်း စိုးစိုးက သူမရဲ့လက်နှင့် အသာကိုင်ပြီး
'No,အခုမဟုတ်သေးဘူးကလေးရယ်...မင်းအသင့်မဖြစ် သေးဘူး' သူမပေါင်တံတွေဆီ
ရွှေ့တင်ပေးရင်း 'မာမီ့ပေါင်တံတွေနှင့်ကစားစမ်းပါကွယ်။ သား
လက်ကလေးတွေနှင့် ပွတ်သပ်တာ ကြိုက်လွန်းလို့ပါ' တဲ့တောင်းဆိုတယ်။
နုညံ့အိထွေးတဲ့ သူမပေါင်တံအစုံက အသားဆိုင်တွေကို ဖျစ်ညှစ်ပွတ်သပ်ရတာ
အတော်စိတ်လှုပ်ရှားဖို့ကောင်းသလားလို့။ ရုတ်တရက် စိုးစိုးက
ကျွန်တော့်ကိုတမ်းတမက်မောစွာ နှုတ်ခမ်းအစုံကို နမ်းရှိုက်ရင်း အိပ်ယာပေါ်ကို
ကျောခင်းလိုက်ဖို့ သူမရင်သားအစုံနှင့် ကျွန်တော့်ကိုယ်ကို ဖိတွန်းပြီး
လုပ်ဆောင်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်းက တစ်ဆင့် လည်တိုင်၊ရင်အုပ်၊ ပြီးတော့
ဆီးစပ်ဆီကို တဖြည်း ဖြည်း သူမအနမ်းတွေက တရွေ့ရွေ့။ သူမလက်အစုံက
ကျွန်တော့်ငပဲကို ဘောင်းဘီပေါ်ကနေပွတ်သပ်နေရင်းမှ သူမနှုတ်ခမ်းတွေနှင့်
နုညံ့စွာတို့ထိပါတယ်။ ကျွန်တော့်တစ်ကိုယ်လုံး လေထဲလွင့်နေသလိုပါပဲ။
ကြက်သီးများလည်းတဖြည်းဖြည်းထမိသလိုပဲဗျ။ ဘောင်းဘီ မျှော့ကြိုးကို
တဖြည်းဖြည်း အောက်ကိုဆွဲချတော့ပေါ်လာတဲ့ ငပဲထိပ်လေးကို လျှာနှင့်လျက်တယ်။
သူမစားသောက်ပါရော။ အိုး...ဘယ်လို အမည်တပ်ရမည်မသိတဲ့ ခံစားမှုမျိုးကို
ကျွန်တော့်အကြောအချဉ်တွေထဲ က တစ်ဆင့်ခံစားရပါတယ်။
ကျွန်တော့်တစ်ကိုယ်လုံးတဆတ်ဆတ်တုန်ကာ သုတ်ရည်တွေဟာ ငပဲထိပ်ကနေ
ပန်းထွက်ဖို့ ဘယ်လို လုပ်ရမယ်ဆိုတာ သူမ သိလွန်းလုပ်တတ်လွန်းပါတယ်။
'အာ...အ...အ' နောက်ဆုံး ကျွန်တော့်ခြေချောင်းလေးတွေ ကွေးညွှတ်၊ ပြီးတော့
နောက်ဆုံးတစ်စက်ကျန်တဲ့အထိ သူမလျာတွေက လျက်ပြုပါတယ်။ ကျွန်တော့်ငပဲဟာ
ရေဆေးစရာမလို သန့်ရှင်းသွားတာပေါ့နော်။ ရီဝေေ၀ ကျေနပ်တဲ့မျက်လုံးတွေနှင့်
'မာမီ မင်းရဲ့ သုတ်ရည်တွေကိုကြိုက်တယ်။ မာမီ့ကို ထပ်ပြီးတိုက်နိုင်ဦးမလား သား?'
ကလေးရယ်၊ မာမီ့ရင်ခွင်ထဲကို။ ဒီည မာမီ့အိပ်ယာမှာ
ဘာပဲပြောပြော......နွေးထွေးတဲ့ မာမီရဲ့ရင်ခွင်ကို ကျွန်တော်......။
ကျွန်တော် အချိန်ပိုင်းအလုပ် ဒုတိယတစ်ခုကို လုပ်နေခဲ့တာ ကြာပါပြီ။ တစ်ပတ်မှာ ညဘက်ပိုင်း အချိန်တွေလှုပ်ရှားရုံနှင့် လာမယ့် အားလပ်ရက်တွေအတွက် အပိုဝင်ငွေရမှာသေချာတယ်လေ။ ကျွန်တော် tuxedo အရောင်းဆိုင်ငယ်လေးတစ်ခုမှာ အလုပ်လုပ်နေခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ချုပ်လုပ်ပြီးသား အဲဒီ ညစာစားပွဲတက်တဲ့အခါဝတ်လေ့ဝတ်ထရှိတဲ့ ၀တ်စုံတွေကို လာယူသူရှိရင် အသင့်ထုပ်ပိုးပေး၊ သူတို့ ၀တ်စုံ အတွက် fitting ဖြစ်ဖို့ တိုင်းတာချင်တဲ့အခါ တိုင်းတာပေးရုံလေးတွေပါပဲ။
အလုပ်သိပ်ရှုပ်တဲ့နေရာတစ်ခုမဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။ ဒုတိယ အချိန်ပိုင်း အလုပ်တစ်ခုဆိုတာအတွက် တကယ့် perfect ပါပဲနော်။ ဆိုင်ငယ်လေးတွေ စုစည်းထားတဲ့ ဈေးရောင်းစင်တာတစ်ခုထဲမှာ ဆိုင်လေးရှိပါတယ်။ ဆိုင်ရဲ့ဘေးမှာ တခြားစတိုးဆိုင် သုံးလေးခုလောက် ကပ်ရက်ရှိပြီး လက်သည်းအလှပြင်ဆိုင်၊ စတစ်ကာဓာတ်ပုံဆိုင်၊ ပြီးတော့ တရုတ် အစားအစာအမြန်ရတဲ့ဆိုင်တို့လည်းရှိနေရော။ ပြောဖို့သိပ်မရှိပါဘူး လှုပ်ရှားတက်ကြွမှု သိပ်မများတဲ့ အရောင်းအ၀ယ် စင်တာလေးပါ။
ည၈း၀၀နာရီထိုးပြီ။ ဆိုင်ပိတ်ဖို့ တစ်နာရီလောက်အလိုမှာမှ တံခါးမက bell တီးသံကိုကြားလိုက်ရတယ်။ ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တော့ မြင် လိုက်ရတဲ့ မြင်ကွင်းက အံ့အားသင့်သွားစရာ။ အရပ် ၆ပေ၃လက်မ၊ ခန္ဓာကိုယ်တောင့်တင်းပြီး ကြွက်သားတွေနှင့်ပြည့်နေတဲ့ အမျိုးသား တစ်ယောက် တံခါးဖွင့်ပေးလိုက်ရုံနဲ့ဝင်လာတယ်။ အလေးမသမား တစ်ယောက်ရဲ့ ကိုယ်ဟန်ရှိတယ်။ အညိုရောင် ဂျက်ကက်နှင့် ခပ်ကြပ်ကြပ် ဂျင်းဘောင်းဘီတို့ဖြင့် သူ့ခန္ဓာကိုယ်ပုံရိပ်ကို ဖုံးကွယ်ထားတာ။ သူခြေလှမ်းတိုင်း လှမ်းတိုင်း သူ့ပေါင်ခြံထဲကဟာက ရုန်းထွက်လာတော့မယ့်အတိုင်း။ သူ့ဆံပင်တွေက အရောင်ဆိုးထားတာလားမသိ နီညိုရောင်ဆံပင်တွေ ဖြစ်ပြီး စစ်သားတွေ ညှပ်နေကျ ဆံပင်ပုံကို ညှပ်ထားတာဗျ။ သူ့လည်ပင်းကလည်း သစ်မြစ်စုံအလား ခိုင်မာပြီး မေးရိုးတွေက ထင်းရှားပါတယ်။ အသားရေက ၀င်းဝါနေပြီး ပါးသိုင်းမွှေးတွေက စိမ်းနေတာပါပဲ။
ကောင်တာရှိရာကို သူလှမ်းလာချိန်မှာတော့ ကျွန်တော် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်သတိကပ်ရတယ် ပါးစပ်ဟောင်းလောင်းဖြစ်မိနေခြင်းကိုပေါ့။ ကျွန်တော် သူ့ကို အပြုံးနဲ့ နှုတ်ဆက်ရင်း လာတဲ့အကြောင်းကိုမေးတော့ 'ညီ...fitting လုပ်ဖို့လာတာပါ။ ညီထက်အောင်မင်္ဂလာပွဲ အတွက်' တဲ့ ဖြေတယ်။ ကျွန်တော် ကောင်တာ နောက်ကခုံမှာ အသာထိုင်နေရခြင်းအတွက် ကျွန်တော်ဝမ်းသာရတယ်ဗျ။ ဘာကြောင့် လဲဆိုတော့ သူ့အသံကိုကြားရတာနဲ့တင် ဒူးတွေအားနည်းပြီး ယိုင်ချင်သလိုလိုဖြစ်လာမိတယ်လေ။
'ဟုတ်..ဟုတ်ကဲ့ဗျ ဆိုင်အနောက်က အခန်းထဲကျေးဇူးပြုပြီးလိုက်ခဲ့ပါ ကျွန်တော် သေချာတိုင်းပေးပါ့မယ်'
သူသဘောကျသလို ရယ်ရယ်ပြုံးပြုံးလုပ်ရင်းဆိုင်ရဲ့ အနောက်ဘက်ခြမ်းကို လိုက်ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော် အနောက်ဖက်အခန်းထဲက သုံး ဖက်မြင် မှန်ချပ်တွေရဲ့ရှေ့ ဘယ်လိုရပ်ရမယ်ဆိုတာ ညွှန်ကြားလိုက်တယ်။ ကျွန်တော် သူ့အနောက်ကနေ လိုက်ဝင်ပြီး ခန္ဓာကိုယ် အောက်ပိုင်းဆီ အကြည့်ရောက်မိတော့ အံအားသင့်ဖို့ကောင်းတာ တစ်ခုထပ်တွေ့ရတယ်။ ဒီငနဲက ပြည့်တင်းပြီး လုံးကျစ်နေတဲ့တင်ပါး အစုံကို ပိုင်ဆိုင်ထားတာပဲ။ သူ့ရဲ့ကြီးမားသန်မာတဲ့ တင်ပါးအစုံဟာ ၀တ်ထားတဲ့ ဂျင်းဘောင်းဘီနဲ့ ကြပ်နေသလို ကျွန်တော်ခံစားရပါ တယ်။ ဖိအားတစ်ခုခုနဲ့များ ဖိလိုက်ရင် ပေါက်ထွက်သွားမလား ကျွန်တော့်ရင်မှာ တထိတ်ထိတ်။
ကျွန်တော့်စိတ်ထဲမှာ ဒီလူ့ကို အ၀တ်ဗလာ ဒါမှမဟုတ် အနည်းဆုံး အတွင်းခံဘောင်းဘီနှင့်ဖြစ်ဖြစ် မြင်ချင်စိတ်ဖြစ်နေပြီ။ အရင်က လူ တစ်ချို့ကို လုပ်ခဲ့ဘူးတဲ့ trick လေးတွေသုံးပြီး သူ့အ၀တ်တွေကို ဆွဲချွတ်ဖို့ ကျွန်တော် ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ တချို့အချိန်တွေမှာ အဲဒါ က အလုပ်မဖြစ်ပေမဲ့ တစ်ခါလောက်တော့ အလုပ်ဖြစ်ခဲ့သား။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်ကြိုးစားကြည့်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ရတာပေါ့။ သူဝတ်ထားတဲ့ ဂျင်းဂျက်ကက်ကို ဆွဲချွတ်ပြီး ဘယ်နေရာမှာ ချိတ်ရမလဲ ကျွန်တော့်ကိုမေးတယ်။ အိုး...ကြွက်သားတွေက သန်မာပြီး ကျောပြင်က ကျယ် ပြန့်လိုက်တာ။ ကျွန်တော်ဖြင့် ယုံရခက်ခက်ပဲ အတွင်းက သူဝတ်ထားတဲ့ ခပ်ကြပ်ကြပ် ဆွယ်တာအပြာရောင်က ခန္ဓာကိုယ်ကို အတိုင်း သားမြင်နေရ တယ်။ကျွန်တော် တံတွေးကို ခက်ခက်ခဲခဲ မျိုချပြီး အင်္ကျီချိတ်တဲ့နေရာကို ညွှန်ပြလိုက်ရတယ်ပေါ့။
ဒီလူ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်က အ၀တ်တွေကို ဖယ်ရှားနိုင်ဖို့ ကြိုးစားရမယ့်အချိန်ရောက်ပြီမို့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချ စတင်လိုက်ပါတယ်။ 'အိုကေ... ခင်ဗျား ခန္ဓကိုယ်အတိုင်းကို တိတိကျကျပြန်တိုင်းဖို့ဆိုရင် အ၀တ်တွေချွတ်ပစ်ဖို့လိုမယ်ထင်တယ်'
'အ၀တ်အစား Fitting လုပ်ဖို့အတွက် ချွတ်ပစ်ရမယ်? ညီဖြင့်တစ်ခါမှ မကြားဖူးဘူး' ကျွန်တော့်ကို တစ်ချက်လှည့်ကြည့်ပြီး ပြုံးကာ သူ ကပြောပါတယ်။
'အင်း...အတိုင်းအတာကို တိတိကျကျ သိဖို့ပါဗျာ' ကျွန်တော်လိမ်လိုက်တယ်။
သူ့မျက်နှာမှာ အပြုံးတစ်ချက်ပျောက်သွားရင်း ပခုံးတွန့်လိုက်သေးတယ်။ ပြီးတော့ တစ်စက္ကန့်တောင် မဆိုင်းဘူး သူ့အတွင်းခံရှပ်ကိုပါ ခေါင်းပေါ်ကနေ ဆွဲချွတ်လိုက်တာ ပေါ်လာတဲ့ ရင်အုပ်ကြီးက အားရစရာ။ နို့သီးခေါင်းလေးတွေက ကြီးမားပြီး မာတောင်နေတာပဲ။ နောက်ပြီး ဗိုက်သားတွေမှာ six-pack နဲ့ဗျ။ သူ့ရှူးဖိနပ်ကို ကြိုးဖြေကာ ကန်ချွတ်လိုက်ရင်း ဂျင်းဘောင်းဘီ ခါးပတ်ခေါင်းကို စဖြုတ်ပါ တော့တယ်။ ဒီဘဲကို အ၀တ်အစားတွေ ကျွန်တော်ချွတ်ခိုင်းတာမှာ ဒီလောက်လွယ်ကူလိမ့်မယ်လို့ ကျွန်တော်မယုံနိုင်ဘူးဗျ။ သူ့ ဂျင်း ဘောင်းဘီက တော်တော်ကြပ်နေပုံဟန် ခါးနေရာသာမက တခြားနေရာတွေရော။ သူ့ပေါင်ခွဆုံနှင့် တင်ပါးတွေက အတော်ကြီးတာ ဘောင်းဘီဝယ်ဖို့ရှာရင် အတော်တော့ခက်ခဲမှာပါ။ သူ့ဘောင်းဘီကြယ်သီးတွေ ခါးပါတ်တွေကိုဖြုတ်ပြီးအောက်ကိုဆွဲချဖို့ သူစတင်ပြီ။ ကြွက်သားအပြည့်နှင့် ဂရိကျောက်ဆစ်ရုပ်ကြီး သူ့တင်ပါးကတစ်ဆင့် ဘောင်းဘီကို လျှောချနေရဲ့။ သူ့ဘောင်းဘီကို လှုပ်ပြီးဆွဲချ လိုက် တာ နောက်ဆုံးတော့ရသွားတာပါပဲ။ 'အိုး' ကျွန်တော်တွေးထင်ထားတာထက် ရင်ခုန်အောင် ဆွဲဆောင်အားကောင်းတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ပိုင်ရှင် ပါ။ ကြီးမားထွားကြိုင်းတဲ့ ဘော်ဒါကြီး အနက်ရောင် ခြေအိတ်နှင့် အတွင်းခံပါးပါးလေး တစ်ထည်ကလွဲလို့ သူ့ကိုယ်ခန္ဓာပေါ်မှာ ဘာမှမရှိ။ သူ့အတွင်းခံက ဖောက်ထွင်းပြီး အားလုံးကိုမြင်နေရတာ။ ကျွန်တော်အတွင်းထဲကို စိုက်ကြည့်ပြီး ဘယ်နှစ်လက်မလောက်ရှိတယ်ဆိုတာ တောင် ခန့်မှန်းလို့ရတယ်။
သူ ကျွန်တော့်ကို မျက်နှာမူပြီး ရပ်နေတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော့်မျက်ဝန်းအကြည့်တွေက မှန်မှာထင်နေတဲ့ ပြည့်တင်းဖောင်းကြွနေတဲ့ သူ့ တင်ပါးအစုံရဲ့ ပုံရိပ်တွေကနေ လွှဲဖယ်လို့ မတတ်နိုင်ခဲ့။ သူ့တင်ပါးက အသားဆိုင်တွေရဲ့ တွန်းကန်နေပုံများ စာအုပ်စင်က ထူထဲလှတဲ့ စာအုပ်ကြီးတွေ အုံကြွနေသလိုမျိုးဗျ။ အတွင်းခံဘောင်းဘီမှာပါတဲ့ အ၀တ်စဟာ တင်ပါးအကွဲကြောင်းကိုဖုံးတယ်ဆိုရုံလေး၊ မို့မောက်နေ တဲ့ တင်သားဆိုင်တွေကို လုံအောင်မဖုံးနိုင်ပါဘူး။ သူ ဘာမှ စကားမဆိုဘဲ ခဏတာငြိမ်သက်ပြီး ကျွန်တော့်စကားသံကို နားစွင့်နေတယ်။ ကြွက်သားတွေအပြည့်ရှိတဲ့ သက်ရှိပန်းပုရုပ်တစ်ရုပ်ဟာ သေးငယ်တဲ့ အ၀တ်တစ်စသာ အောက်ပိုင်းကိုဖုံးအုပ်ထားရင်းပေါ့။ သူ့ရွှေဥတွေ ဟာ လုံးဝန်းကြီးမားပြီး နိုင်လွန်ထောင်နံရံကနေ တွန်းထိုးထွက်နေကြပါတယ်။
ဒီလူ ကျွန်တော် သူ့ခန္ဓာကိုယ် အစိတ်အပိုင်းတွေကို အာရုံစိုက်နေတယ်ဆိုတာ သိနေကြောင်း သူ့ပြောစကားအရ သိရပါတယ်။ 'ဒီဘောင်းဘီက လက်ဆောင်ရထားတာ'
'ညီ့ စေ့စပ်ထားတဲ့ ကောင်မလေးက ပေးထားတဲ့လက်ဆောင်တစ်ခုပေါ့။ သူပြောတာက ညီ့တင်ပါးတွေနဲ့ဆို ဒီလိုဘောင်းဘီမျိုးက ကြည့် လို့အတော်ကောင်းတယ်တဲ့'
'စေ့စပ်ထားတဲ့ ကောင်မလေး? ဒါဆို ခင်ဗျားက သတို့သားလောင်းပေါ့'
သူ ခေါင်းငြိမ့်ပြီး အဖြေစကားဆိုတယ် 'ဟုတ်တယ်'
'အင်း..မင်းကောင်မလေး ဘာကိုဆိုလိုတယ်ဆိုတာ သဘောပေါက်ပြီ' ကျွန်တော့်ပါးပြင်ဟာ နီရဲသွားရတာပေါ့။ 'ကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာ က ခင်ဗျား ဒီဘောင်းဘီကို ၀တ်ထားတော့ ခင်ဗျားတင်ပါးတွေကို ကြည့်လို့အဆင်ပြေစေတယ်လို့။ အဲဒါက ခင်ဗျား တင်ပါးတွေနဲ့ ကွက်တိပဲ' ပြောသာပြောလိုက်ရတယ် ဒီတစ်ခါ သူ့ဘက်က ဘယ်လိုတုန့်ပြန်လာမလဲ မသေချာပါဘူး။
ဗလကြီးက မှန်ချပ်တွေရဲ့ ရှေ့ ကျွန်တော်နှင့်အတူ အ၀တ်မဲ့နီးပါး ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ ရပ်နေရတာကို စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ဟန်မပြ။ သူ နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်ပြုံးလိုက်ရင်း တစ်ချက်ရယ်သွမ်းသွေးကာ 'မစိုးရိမ်ပါနဲ့ ဘော်ဒါရ ညီ့ဘောင်းဘီကြောင့် တင်ပါးတွေ ထင်ရှားနေတာ ဟုတ်ဘူး၊ ညီက တင်ပါးကြီးတာ နဂိုကတည်းကပါ'
ကျွန်တော့်မျက်ဝန်းတွေက ဦးခေါင်းတွေ ကျွတ်ထွက်သွားတော့မလို ၀ိုင်းသွားရပါတယ် သူဆက်ပြောတဲ့ စကားများကြောင့်ပါ။ 'ရှော့ခ် သိပ်မဖြစ်ပါနဲ့။ ညီ့တင်ပါးတွေ ထွားတာသိပါတယ်။ ညီ့ ဘ၀တလျှောက်လုံး ဒီလိုပဲ ဂရုစိုက်ကြည့်ခံရတာ။ ညီ ငယ်ငယ်ကတည်းက တင်ပါးလေးက ခပ်လုံးလုံးလေးလို့ကို ပြောခံခဲ့ရတာလေ'
ကျွန်တော့်ကိုယ် ကျွန်တော်ပြန်ထိန်းသိမ်းလိုက်ရင်း 'ဟုတ်တယ် တင်အစိတ်အပိုင်းက ကျွန်တော်တို့ fitting လုပ်တဲ့နေရာမှာ အခက် တွေ့မယ့်နေရာပဲ။ ခင်ဗျား တင်နောက်ပိုင်းက ထွားတော့ tuxedo တစ်စုံအတွက်ဆို ခင်ဗျား အံဝင်ဂွင်ကျဖြစ်ဖို့မလွယ်ဘူး။ ကျွန်တော်တို့ အဲဒီကိစ္စအတွက် သတိထားပြီး ပြင်ရမယ်'
'ညီ..သိပါတယ် ညီငယ်ငယ်ကတည်းက ဘောင်းဘီကို ချုပ်ဆိုင်မှာ သေချာချုပ်ပြီး ၀တ်ခဲ့ရတာ အခုအချိန်ထိပါ။ တင်ပါးတွေက ထွားနေ လို့တဲ့လေ'
ကျွန်တော့်ငပဲက မာတောင်လာပါရဲ့ သူ့တင်ပါးအရွယ်အစားအကြောင်း အသေအချာပြောပြနေတာကို နားထောင်နေရင်းပေါ့။ ဒါပေမဲ့ သူ့တင်ပါးတွေကို ကျွန်တော့်ဘက်လှည့် မှန်ချပ်ကို မျက်နှာမူခိုင်းပြီး ခန္ဓာကိုယ်အတိုင်းအတာ ယူလိုက်ခြင်းဖြင့် ကျွန်တော့်ဖြစ်စဉ်ကို ဖုံးကွယ်လိုက်ပါတယ်။ ပထမ - ကျွန်တော်သူ့ပခုံးတွေ၊ လက်တံ၊ ရင်အုပ်တွေကို တိုင်းတာလိုက်တယ်။ နောက်တော့ ကျွန်တော် ပေါင်တံ အရှည်ကို တိုင်းတာပြီး ဒူးတစ်ချက်ထောက်ကာ ထိုင်ချလိုက်တာမှာ ဗလမောင်ရဲ့ တင်ပါးအစုံဟာ ကျွန်တော့်မျက်နှာနှင့် လက်မအနည်း ငယ်သာ ဝေးပါတော့တယ်။ ကျွန်တော် တင်သားတွေကို သေချာစူးစမ်းဖို့ မိနစ်အနည်းငယ် ယူလိုက်တာပေါ့။ နုညံ့ပြီး အသားအရေက ဖြူဖွေးနေတော့....အိုး... ကျွန်တော့်လျှာကို ခပ်ရှည်ရှည် ထုတ်ပြီးလျက်လိုက်ရရင် ကောင်းမယ်။
တစ်နည်းအားဖြင့် ကျွန်တော် သူ့ရဲ့တုတ်ခိုင်လှတဲ့ ပေါင်တံတွေကို စတင်တိုင်းတာလိုက်တယ်။ ကျွန်တော့်လက်တွေကို ပေါင်တံတွေဆီ နေရာအနှံ့ရောက်စေရင်းပေါ့။ အတိုင်းအတာ နံပါတ်တွေကို စာရွက်ပေါ် ချရေးထားလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ တစ်ခုခုကို ကျွန်တော်ကြိုးစား ကြည့်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ကျွန်တော် သူ့ကို fitting ကောင်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်စေဖို့ဆို သူ့ခြေချောင်းတွေဆီ ခါးကို ညွှတ်ပြီး ထိနေ ကြည့်ဖို့ပြောလိုက်တယ်။ သူ ထိုင်ချပြီး ခြေထောက်ကို ကွေးကြည့်ဖို့ဆို ဒီအခန်းထက် နည်းနည်းကြီးတာ သူလိုလိမ့်မယ်လို့ ကျွန်တော် အိုင်ဒီယာရတာကိုး။ ဒါဟာ လိမ်လည်မှုတစ်ခုဆိုတာ ဖြစ်နေပေမဲ့ ယုံကြည်လောက်တဲ့ လေသံတော့ပေါက်ပါတယ်။
ကျွန်တော်ပြောတဲ့ကိစ္စကို သူ နှစ်ခါမစဉ်းစားဘဲ သူ့ခါးနေရာကနေ အရှေ့ကို ခပ်ဖြည်းဖြည်း ကိုင်းချလိုက်ပါတယ်။ သူ့နောက်မှာ မုဆိုး ဒူးထောက်ထိုင်နေတဲ့ ကျွန်တော့်အတွက်တော့ မိနစ်တိုင်းဟာ သဘောကျစရာပေါ့။ မသိများမသိရင် သူ ကျွန်တော့်ကို မရိုးမရွဖြစ်အောင် စနောက်နေသလိုပါပဲ။ သူ ခပ်ဖြေးဖြေး ရှေ့ကိုဆက်ကုန်းတော့ သူ့ရဲ့ ကြီးမားဝိုင်းစက်ပြီး ပြည့်တင်းနေတဲ့ တင်ပါးသားတွေဟာ ခပ်ပါးပါး ဘောင်းဘီကနေ ပေါက်ထွက်မလို ဖောင်းကားလာပါတယ်။ တင်ပါးပြင် တစ်ခုခြင်းစီဟာ ကျစ်လစ်ပြီး တင်းနေတော့ အတွင်းခံဘောင်းဘီ ခပ်သေးသေးရဲ့ အစွမ်းကြောင့် မဲမှောင်တဲ့ တောင်ကြားလမ်းကို ခပ်ရေးရေးမြင်နေရတာ...အိုးး။
ဘာမှ မတွေးမိခင် ကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်းတွေကို လျှာနှင့်သရပ်မိပါတယ်။ တိုင်းတဲ့ပေကြိုးကို ကိုင်ဆွဲရင်း ဒီငနဲရဲ့ တင်ပါးတွေဆီကို တိုင်းဖို့ လုပ်ဆောင်သည်ပေါ့။ တင်ပါးတွေကို မထိတထိပွတ်သပ်မိတယ် ဖီလင်လာမယ့် ဒီဇိုင်းမို့ သူ့အတွက်လေ။ သူ့တင်ပါးတွေကို ကျွန်တော် မသိမသာ ကိုင်တွယ် ကစားတာကို တုန့်ပြန်တဲ့ အမူအယာမတွေ့ရဘူး။ သူ့တင်ပါးတွေကို ကျွန်တော်ကိုင်တွယ်ရတာ ရင်တွေ တဆတ် ဆတ်ခုန်မိသလိုပါပဲ။နုညံ့အိထွေးပြီး ကိုင်တွယ်လို့အတော်ကောင်းပါတယ်။ သူ့တင်ပါးဆုံ အ၀န်းအ၀ိုင်းကို တိုင်းတာရင်းမှ ပေါင်းတံတွေ ခြေသလုံးတွေဆီ ဆက်တိုင်းတယ်။ ပြီးတော့ နောက်ခြေထောက်တစ်ဘက်ဆီကို ဆက်တိုင်းတာ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော့်လက်တွေဟာ သူ့ရဲ့တင်ပါးဝိုင်းစက်စက်ဆီ ရောက်နေမိတာပါပဲ။ ခြေချောင်းတွေနှင့် သူ့လက်ကို ကွေးရင်းထိထားတဲ့ တစ်ချိန်လုံး သူ့တင်ပါးတွေက ကားထွက်နေတာ။
ခပ်မတ်မတ်ပြန်ရပ်ဖို့ ကျွန်တော်သူ့ကိုပြောလိုက်တယ်။ သူ ကျွန်တော်ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်း ပြန်လှန်မေးခွန်းမထုတ်ဘဲ လုပ်ဆောင်ပါရဲ့။ နောက်တော့ သူ့ပေါင်တွေကို ခပ်ကားကားထားလိုက်ဖို့ ပြောလိုက်တယ် ပေါင်တွင်းသား အတိုင်းအတာကို ကျွန်တော်တိုင်းတာနိုင်ဖို့ ပေါ့။ သူ့ ခပ်သင်းသင်းတစ်ချက်ရယ်လိုက်ကာ ပေါင်တံတွေကို ကားလိုက်ပါတယ်။ ဒီလူဟာ အတော်ဆွဲဆောင်အားကောင်းသူပါပဲ။ မြင်သူတိုင်းရင်ခုန်စေမယ့် ကိုယ်လုံးမျိုးပိုင်ဆိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တိုင်းတာဖို့ သူ့ပေါင်တွေကို ကားထားတာကြောင့် ကျွန်တော့်လက် တွေနှင့် သူ့ရွှေဥတွေဟာ ပွတ်သပ်ထိမိနေရော။ ကျွန်တော့်နှာခေါင်းဟာလည်း သူ့တင်ပါး အိအိဖောင်းဖောင်းတွေနှင့် ထိကပ်လုနီးပါး ပေါ့။ သူ့ခြေထောက်တွေကို နှစ်ဖက်လုံးတိုင်းတာနေချိန်မှာ သူ့ရဲ့ယောက်ျားဆန်တဲ့ ကိုယ်နံ့တစ်မျိုးကို ရနေပါတယ်။ သူ့အတိုင်း အတာတွေကို သေချာတိကျတိုင်းဖို့ ကျွန်တော့်ဘက်ကိုလှည့်ပြီး မျက်နှာမူဖို့ သူ့ကိုထပ်ပြောလိုက်ပါတယ် ခဏနေတော့။
ကျွန်တော့်ဘက်ကို သူမျက်နှာမူဖို့လှည့်လိုက်ပါတယ်။ ရွှေဥတွေနှင့် ကြီးမားတဲ့ငပဲတို့ဖြင့်ပြည့်နေတဲ့ သူ့အတွင်းခံဟာ ကျွန်တော့်မျက်နှာ နှင့် တန်းနေရော။ ကျွန်တော့်အထင်ကိုပြောရရင် မသေချာပေမဲ့ သူ့ငပဲဟာ တဖြည်းဖြည်းကြီးလာသလိုပါပဲ။ သူ စိတ်လာပြီး မာတောင် လာသလားလို့။ သူ့ပေါင်တံတွေကိုခွဲပြီး ကားရပ်ဖို့နောက်တစ်ကြိမ် ညွှန်ကြားလိုက်ပါတယ် သူ့ပေါင်အတွင်းသားပိုင်းကို တိုင်းတာဖို့ လေ။ ပေါင်တွေကို သူကားထုတ်လိုက်တော့ ရွှေဥတွေဟာ အတွင်းခံသေးသေးလေးရဲ့ ဖုံးအုပ်မှုကနေ လွတ်နေရော။ ကျွန်တော် သူ့ ရွှေဥတွေ ကိုကိုင်ပြီး ညာဘက်ပေါင်ခြံကို တိုင်းတယ်ပေကြိုးနဲ့ သူ့ပေါင်တွေကြား နေရာယူထားရင်း။ ကျွန်တော် သူ့ရွှေဥတွေကို ထိ တော့ သူမသိ မသာ နောက်ဆုတ်လိုက်ပေမဲ့ စကားတစ်လုံးမှမဆိုဘူးဗျ။ ပြီးတော့ အဲဒီရွှေဥတွေကို ညာဘက်ကပ်စေရင်း မသိမသာ ညှစ်ပြုပြီးမှ တခြား ပေါင်တံကို ကျွန်တော်ဆက်တိုင်းပါတယ်။ ကျွန်တော်အလုံးစုံကိစ္စပြီးမှ သူ့ရွှေဥတွေကို မသိမသာကစားခြင်းမှ ရှောင်ရှားလိုက်တာပေါ့။
အခုတော့သေချာပြောနိုင်ပြီ။ သူ့ရဲ့ ငပဲဟာကြီးထွားလာနေပြီ။ အဲဒါလုံးဝမမှားတဲ့အဖြစ်အပျက်ပဲ။ ကျွန်တော်က မုဆိုးဒူးထောက်ထိုင် နေတဲ့အနေအထားမှာရှိနေဆဲဆိုတော့ သူ့ကိုမော့ကြည့်မိပါတယ်။သူက ကျွန်တော့်ကိုငုံ့ကြည့်နေကာ မျက်နှာပေါ်မှာ အပြုံးကြီးကြီး တစ်ပွင့်နှင့် 'ဆက်လုပ်လေဗျာ' တဲ့ပြောတယ်။ 'ဗျာ....ဘာ...ဘာလဲ?' ကျွန်တော်ကြားလိုက်ရတာကို သံသယဖြစ်စွာမေးမိလိုက်ခြင်းပါ။
'ညီ ပြောတာ မကြားဘူးလားဗျ ခင်ဗျားလုပ်နေတာကို ဆက်လုပ်လို့ပြောတာ' သူက ပြောလည်းပြော လက်ကလည်း တုတ်ခိုင်ထွားကျိုင်း တဲ့ငပဲကို အတွင်းခံဘောင်းဘီ အသေးလေးကနေ ဆွဲထုတ်လိုက်တာမှာ သူ့ရွှေဥတွေက ဘောင်းဘီနှင့်ငြိနေသေးရော။
ကျွန်တော် သူ့မျက်နှာကို မော့ကြည့်ပြန်ကာ ပါးစပ်ကိုအသာဟလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ မျက်ဝန်းတွေဆုံဆည်းနေပြီးသကာလ သူ့ ဦးခေါင်းကို ငြိမ့်ပြပြီး ဆက်လုပ်ဖို့ အချက်ပြတယ်။ သူ့မျက်ဝန်းတွေကို ကျွန်တော် မော့ကြည့်နေဆဲမှာ ကျွန်တော့်လက်တွေကတော့ သူ့ငပဲကိုဆုပ်ကိုင်ပွတ်သပ်နေပြီ။ ကျွန်တော် သူ့ငပဲရဲ့ကွမ်းသီးခေါင်းလေးကို ခပ်ဖြေဖြေးငုံလိုက်ရင်း လျှာဖျားလေးနှင့် ထိပ်ဝလေးကို အသာကလိမိပါတယ်။ သူ့မျက်ဝန်းတွေ မှေးမှိတ်သွားပြီး နှုတ်ဖျားက မိန်းမောသာယာသံတွေထွက်လာတာ 'အာ...အ...ရှီး။ သူ့ငပဲကို ထိပ်ပိုင်းလေးသာမက အတွင်းထဲရောက်နိုင်သမျှ အာခံတွင်းထဲ အထုတ်အသွင်းလုပ်လိုက်ပါရဲ့။ သူ့ငပဲကို မက်မက်မောမော စုပ်ပြု လိုက်တာ ပါးစပ်ထဲမှာ ပိုရှည်ပြီး ပြည့်လာသလို ခံစားရပါတယ်။ သူ့ငပဲက အပြည့်အ၀မမာတောင်ရသေးပေမဲ့ ၇လက်မလောက်ရှည်ပြီး တော်တော်တုတ်လာပြီ။ ကျွန်တော် ရွှေဥတွေကိုလည်း ပွတ်သပ်မိပြီပေါ့နော်။
ကျွန်တော့်ဦးခေါင်းကို လက်တစ်ဖက်ဖြင့် ထိန်းကိုင်ပြီး သူ့ငပဲကို ပါးစပ်ထဲ အထုတ်အသွင်းလုပ်တယ်။ ပြီးတော့ သူ့လက်နှစ်ဖက်လုံးဖြင့် ထိန်းကိုင်လိုက်ကာ ပိုပိုထွားလာတဲ့ ငပဲကို ပါးစပ်ထဲမွှေတယ်ဗျ။ ကျွန်တော် သူ့ငပဲကို လက်နဲ့ထိန်းကိုင်လိုက်ရင်း ကွမ်းသီးခေါင်းလေးရဲ့ အပေါက်ဝကို လျှာဖျားလေးဖြင့်ပိုပိုထိုးမိပါတယ်။ တောင့်တောင့်ဖြောင့်ဖြောင့် သတို့သားလောင်းလေး သူ့ငပဲကို ကျွန်တော့်ပါးစပ် မုန်တိုင်းမွှေနေတာမှာ နစ်မျောနေတာများ အားရပါးရ။
ကျွန်တော့်ပါးစပ်နှင့် သူ့ငပဲကို ဖမ်းထိန်းပြီး ဆက်လက်ပြုစုဖြစ်ပေမဲ့ ခဏကြာတော့ သူ့တင်ပါးအစုံကို လက်နှစ်ဖက်နှင့်ဖမ်းကိုင်ကာ ဆွဲ ယူလိုက်ပါတယ်။ တင်သားဆိုင်တွေကို ကိုင်ရတာပြည့်တင်းပြီး အိနေတာ ကိုင်လို့အတော်ရင်ခုန်ရပါရဲ့။ ကျွန်တော့်လက်ချောင်းတွေဟာ တင်သားဆိုင်နှစ်ခုကြားက အကွဲကြောင်းတလျှောက်မှာ မျှော့သွေးစမ်းကစားရင်း ပါးစပ်နှင့် ငပဲကို တပြွတ်ပြွတ်ပေါ့စုပ်တာ။ ကျွန်တော် သူ့ရဲ့ အတွင်းပိုင်းခရေ၀ထိ ကစားတာကို ပေါင်တံနှစ်ဖက်ပိုမိုကားပေးခြင်းဖြင့် ခွင့်ပြုသလို သူ့နှုတ်ဖျားက ညည်းညူသံကလည်း ပိုပိုမိုမို ပေါ့။ ခရေ၀နှုတ်ခမ်းသားတွေကို လက်ချောင်းလေးတွေဖြင့် ပွတ်သပ်တယ်။ ပြီးတော့ အတွင်းထဲရောက်အောင် ချော့ချော့သွင်းတာမှာ သူ ကလည်း မသိမသာ နောက်ပြန်ရွေ့ရင်း ဖိဖိသွင်းတာလေ..ဟိ။
'ခင်ဗျား...ညီ့ဟာထဲမသွင်းချင်ဘူးလား? ညီ့ဖင်ထဲ ခင်ဗျား-ိုးတာ ခံချင်လာပြီဗျာ' သူ့ရဲ့နှုတ်ဖျားက ထွက်လာတဲ့စကားများပါ။
ဒါမျိုးဆို ကျွန်တော့်ကိုနှစ်ခါမေးစရာမလိုပါဘူး။ ကျွန်တော့်ပါးစပ်ထဲငုံစုပ်နေတဲ့ သူ့ငပဲကို ပစ်ထားလိုက်ကာ ကျွန်တော့်ကိုယ်ပေါ်မှာရှိတဲ့ အ၀တ်အစားတွေကိုမြန်နိုင်သမျှ မြန်မြန်ဖယ်ရှားပါတယ်။ သူက ပါတယ်ဆိုရုံဝတ်ထားတဲ့ သူ့အတွင်းခံဘောင်းဘီကို ဆွဲချွတ်လိုက်ကာ မှန်ဘက်ကိုမျက်နှာမူလိုက်ပါတယ်။ သူ့လက်အစုံကို ဒူးမှာထောက်ကိုင်လိုက်ရင်း ခပ်ကုန်းကုန်းအနေအထားပြင်လိုက်တာ ပြည့်တင်းတဲ့ သူ့တင်သားတွေဟာ လေထဲမှာ စွင့်ကားနေရော။ သူ့တင်းပါးတွေကို ခပ်ချဲချဲ သူလုပ်ဆောင်ပေမဲ့ တင်သားဆိုင်တွေက ကြီးတာကြောင့် အကွဲကြောင်းက အများကြီး ဟမသွားရပါ။ ကျွန်တော် သူ့နောက်ဘက်မှာ ဒူးထောက်လိုက်ကာ ကျွန်တော့်လက်အစုံနှင့် တင်သားဆိုင် တစ်ဖက်စီကို ကိုင်ကာဖြဲလိုက်ပါတယ် ဖြဲနိုင်သမျှပေါ့။ သူ့ရဲ့မကြွေသေးတဲ့ ခရေပွင့်ဟာ ကျွန်တော့်မြင်ကွင်းထဲ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်ရ ပါပြီ။ ကျွန်တော်လျှာကို ခပ်ရှည်ရှည်ထုတ်လိုက်ကာ သူ့တင်ပါးအကွဲကြောင်း တလျှောက်ဆော့ကစားပါတော့တယ် ခဏပေါ့။
သူ့ ဒူးတွေကို ခပ်တင်းတင်းလက်နှင့် ဆုပ်ကိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်က ခရေ၀အနှံ့လျှာနှင့်ထိုးပြီး မွှေသလို အတွင်းထဲရောက်အောင် ဖိဖိ ပြီး သွင်းကြည့်ပါတယ်။ ကျွန်တော် အဲဒီလိုလုပ်လုပ်လိုက်တိုင်း သူ့နှုတ်ဖျားက ညည်းညူသံထွက်ထွက်လာတာဗျာ။ မတော်တဆလား မသိ လျှာကိုဖိဖိသွင်းပြီး ကစားလိုက်တာ သူ့ခရေ၀ထဲနည်းနည်းဝင်သွားပါရော။ သူ့တင်သားတွေက ကျွန်တော့်မျက်နှာကို နစ်မြုပ်စေ တော့မတတ်ဖြစ်နေတာကြောင့် လက်နှင့် ထိန်းကိုင်ထားရပါတယ်။ အချိန်နည်းနည်းကြာတော့ ညီထက်အောင်ဆိုတဲ့သူတစ်ယောက် မထိန်းနိုင်စွာ 'Fuck me!' တဲ့။
ကျွန်တော့်စိတ်ထဲ တောင့်တမိနေတာရပြီဆိုပြီး ၀မ်းသာအားရမတ်တပ်ရပ် ချမယ်ကြံရွယ်ကာမှ ညနေစောင်းက သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် သူ့အလုပ်ကယူလာပေးတဲ့ condom နှင့် ချောဆီတစ်ချို့ကို သတိရမိတာကြောင့် သူ့ကိုခဏလို့တောင်းပန်ကာ အံဆွဲထဲက ချောဆီနှင့် condom ကိုယူ မာတောင်ပြီးရမ်းနေတဲ့ ကျွန်တော့်ငပဲကို ဘောင်းဘီထဲကထုတ် ချောဆီများများကိုသုတ်လိမ်း၊ သူ့ခရေ၀ကိုလည်း သုတ်လိမ်းပေး လိုက်ပါတယ်။ condom ကိုအသေအချာစွပ် သူ့နောက်ကျောက်ဘက်ကနေပဲ နေရာယူကာ အသင့်စောင့်စားနေတဲ့ ခရေ၀ထဲ ကျွန်တော့်ငပဲကို ဖြည်းဖြည်းခြင်း ဖိဖိထည့်ပါတယ် အလုံးစုံသူ့ဟာက စုပ်မျိုမသွင်းခင်ထိပေါ့။ သူ့နှုတ်ဖျားက မိန်းမောညည်း ညူ သံကကျယ်လောင်စွာထွက်လာကာ ကျွန်တော့်စိတ်ထဲ ပိုမိုသောင်းကျန်းချင်တဲ့ သွေးတွေ ဆူပွက်လာရပါတယ်။ ကျွန်တော့်ငပဲကို ပိုပိုထိုး ထိုးသွင်းရင်း ခပ်ဖြေးဖြေး အထုတ်အသွင်းစလုပ်ပါရော။ ပြီးမှ အဆုံးထိနင့်နင့်နဲနဲ ဖိသွင်းလိုက် ထိပ်ပိုင်းပါထွက်မတတ်ပြန်ထုတ် လိုက် လုပ်တာပေါ့နော်။ ကျွန်တော် သူ့ရဲ့ တုန့်ပြန်ခံစားနေမှုကို နံရံက မှန်ချပ်တွေမှာကြည့်တော့ သူ့မျက်လုံးတွေကို မှေးမှိတ်ပြီး အရသာခံနေတာကိုတွေ့ရတယ်။ တစ်ချက် တစ်ချက် သူ့နှုတ်ခမ်းသားတွေကို လျှာနှင့် သရပ်တာလည်းလုပ်ရဲ့။ မြင်နေရတဲ့မြင်ကွင်းက အတော်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ပါပဲ။ ကျွန်တော်က ပိန်ပိန်ပါးပါးခန္ဓာကိုယ်ပိုင်ရှင်၊ အရပ်က ၅ပေ ၈လက်မ၊ ပြီးတော့ အရပ် ၆ပေ ၃လက်မ ကြွက်သားအဖုဖုနဲ့ ငနဲကို နောက်က -ိုးနေတာလေ။ ကျွန်တော့်-ီးကြီး သူ့ရဲ့ ခရေ၀ထဲဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ဖြစ်နေတာကိုငုံ့ကြည့်မိပါ သေးတယ်။ သူက နောက်ပြန် ဆောင့်သွင်းရင်း 'ခပ်ကြမ်းကြမ်းဆောင့်၊ ဆောင့်စမ်းပါဗျာ...ဆောင့်' ပါတဲ့။
ကျွန်တော် ဆောင့်သွင်းမှုကို အရှိန်မြှင့်လိုက်ပါတယ်။ ဖောင်းအိနေတဲ့တင်သားဆိုင်တွေကို လက်နှစ်ဖက်နှင့် ထိန်းကိုင်ကာ ကျွန်တော် ဆောင့်သွင်းနိုင်သမျှ သူ့ခရေ၀ထဲပစ်သွင်းဖို့ စကြိုးစားပါတယ်။ ညီထက်အောင်တစ်ယောက် သူ့တင်ပါးအစုံကို နောက်ပြန်ဆောင့်ကာ ကျွန်တော့်ပစ္စည်း သူ့ခရေထဲရောက်နိုင်သမျှ ၀င်အောင်သူကြိုးစားတယ်။
'လုပ်စမ်းပါဗျာ....ခပ်ကြမ်းကြမ်းလေး -ိုးစမ်းပါ...ညီ.. ပြီးကာနီးပြီး အာ...အ' သူ့နှုတ်ဖျားက ခပ်ကျယ်ကျယ်ပဲတောင်းဆိုတယ်။
သူ့အသက်ရှူသံ၊ ပြောတဲ့စကားသံတွေကြားရတာ ကျွန်တော့်ကို ပိုပြီးသွေးကြွ စိတ်လှုပ်ရှားစေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်လည်း သွက်နိုင်သမျှမြန်နှုန်းမြင့်တာပါပဲ။ ကျွန်တော်သိတယ် ကျွန်တော်လည်း ပြီးတော့မယ်။ မှန်ထဲငဲ့ကြည့်လိုက်တော့ သူ့မျက်လုံးထဲမှာ ကျေနပ်ပြီး သာယာနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ သူ့မျက်ဝန်းတွေက ကျွန်တော့်ကိုပြန်ကြည့်ပြီး 'အာ...ရှီး...အဲဒါပဲ...ချစမ်းဗျာ...ညီ..ပြီး.. .ပြီးတော့...' ပြောတယ်လေ။ သူ့ခရေ၀ကြွက်သားတွေဟာ ကျွန်တော့်ငပဲကို တင်းကြပ်နေအောင်ဖျစ်ညှစ်ပြီးနောက် နံရံက မှန်ချပ်ဆီ သူ့သုတ်ရည်တွေကို အားရပါးရ ပန်းထည့်ပါတော့တယ်။ သူ့ရဲ့ပြင်းပျတဲ့ အသက်ရှူသံတွေဟာ ကျွန်တော့်ကို မာန်ဟုန်ပြင်းစေပါတယ်။ ကျွန်တော့်ရွှေဥတွေဟာ ကျစ်လစ်စွာပေါင်ခြံကို ကပ်လာပြီး ငပဲကိုတော့ ခရေ၀ထဲ ပိုမိုဖိသွားမိပါရော။ နောက်တော့ပြည့်တင်းနေတဲ့ အိုး ကြီးထဲ ကျွန်တော့်ရွှေရည်တွေ အပြည့်ဖြည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။
'အဲဒါပဲ....GOOD!' သူ့ရဲ့အားရပါးရကျေနပ်သံ ထွက်လာရောပေါ့ ခဏအကြာမှာတော့။
ကျွန်တော့်ငပဲ တဖြည်းဖြည်းပျော့ပျောင်းသွားမှ သူ့ခရေ၀ထဲက အသာချွတ်ရတာပေါ့ သူမနာအောင်။ သူ့ခရေ၀ဟာ ချောဆီတွေ ရွှဲစိုနေ တာပါပဲ။ ကျွန်တော့်ငပဲက condom ကိုချွတ်ကာ အမှိုက်ပုံးထဲသွားထည့်လိုက်ပါတယ်။ 'ဟူး...သောက်ရမ်းမိုက်တယ် ညီထက်အောင်ရာ' ကျွန်တော်မအောင့်အည်းနိုင်စွာပြောလိုက်ပါတယ်။ သူက သူ့ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းတွေက ပေကျန်နေတာတွေကို တစ်ရှူးဘူးက တစ်ရှူးစတွေယူကာ သုတ်သင်ရှင်းလင်းနေပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်သား အ၀တ်အစားတွေအပြည့်ပြန်ဝတ်ပြီးချိန်ထိတော့ စကားမဆိုမိကြပါဘူး။
'နက်ဖြန်? ဘာလို့လဲကွ?' ကျွန်တော်ပြန်မေးလိုက်တယ် သူ့မေးခွန်းကိုမဖြေဘဲ။
'အမ်း...အိုကေလေ နက်ဖြန် ညီပြန်လာမယ် တကယ် fitting လုပ်ဖို့'
'လင်းစမ်းပါ ဘော်ဒါရာ၊ ညီ့ခန္ဓာကိုယ်က ထွားတိုင်း ၀ိတ်ပေါကြီးမထင်စမ်းပါနဲ့။ ညီဆိုင်ထဲ လှမ်းဝင်လာတဲ့အချိန်နည်းနည်းလေး အတွင်း မှာပဲ ခင်ဗျား သေချာကြည့်နေတယ်ဆိုတာမြင်သားပဲ။ ပြီးတော့ fitting လုပ်ဖို့ အ၀တ်တွေချွတ်ခိုင်းတယ်။ သိနေတယ်လေ ခင်ဗျားဘာ တွေလုပ်ချင်နေတယ်ဆိုတာ။ ညီလည်း ခင်ဗျားလို လုပ်ချင်စိတ်ဖြစ်လာတာကြောင့် အားလုံးဖြစ်ပျက်သွားရတာပဲ။ ဒါကြောင့်နက်ဖြန်တော့ ညီ့ မင်္ဂလာဆောင်ဝတ်စုံအတွက် တကယ့် fitting လုပ်ပေး။ အားလုံးပြီးမှ အထူး fitting အတွက်တိုင်းထွာကြာတာပေါ့..ဟဲဟဲ' သူစကား ပြောရင်း ရယ်ကျဲကျဲနှင့် တံခါးမကြီးကတစ်ဆင့် ဆိုင်အပြင်ကို လှမ်းထွက်သွားပါတယ်။ ကျွန်တော်ဖြင့် သူလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်သွားတာ တွေကို ယုံတောင်မယုံနိုင်သေးဘူး။ ပြီးတော့ ဒီလောက် ကျေနပ်သာယာစေတဲ့ လိင်ဆက်ဆံမှုကိုလည်း မကြုံခဲ့သေးပါဘူး။
သူ..မိန်းကလေးတစ်ယောက်နှင့်လက်ထပ်မယ်ဆိုပြီးပြင်ဆင်နေတာ...သူတို့အိမ်ထောင်ရေးအဆင်ပြေပါ့မလား? ကျွန်တော်နဲ့ဘာမှ တော့ မဆိုင်ပါဘူးလေ ဒါပေမဲ့ အိမ်ထောင်ပြုပြီးမှတော့ ပြုပြီးသူတိုင်းအဆင်ပြေစေချင်သား...ဟူး..။
Alex Aung (3 October 2011)